Ergooyinka soo xula baarlamaanka Soomaaliya oo looga yeeray deegaanada ay Al-shabaab ka arimiso – Radio Daljir
Luulyo 15, 2019 12:14 g 0
Bayaan kasoo baxay hoggaanka sare ee Xarkada Al-Shabaab ayaa lagu amray odayashii ergada ee soo xulay baarlamaanka dowladda Federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada.
Bayaankan oo ku qornaa luuqadaha Soomaaliga iyo English-ka ayaa lagu sheegay in Odayaashu ay ku dheceen “Fal gaalnimo ah”, lagana doonayo in ay ka towbad keenaan ficilka ay ku dheceen.
“Waa inay iska diiwaangeliyaan maamulada wilaayaadka islaamiga ah ee koofurta iyo bartamaha Soomaaliya muddo 45 maalmood ah oo ka bilaabaneysa 15-07-2019 kuna eg 01-09-2019-ka.”ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay Al-Shabaab.
Ururka Al-Shabaab ayaa ugu hanjabay in Odeygii ka faa’ideysan waaya baaqa ay marin doonaan shareecada islaamka.
Baaqan ka soo baxay ururka Al-Shabaab ayaa imanaya iyadoo dowlada federalka ay doonayso in doorasho qof iyo cod ah laga qabto dalka Soomaaliya.
Waxaana hore uu ururka Al-Shabaab u diley dad badan oo ka mid ahaa ergooyinkii doortay xildhibaanada baarlamaanka kuwaasoo isugu jira rag iyo dumarba.
istaambada Barafka Bosaaso waxa ay gaartay 100 kun oo shilinka Soomaaliga ah (dhegayso+Sawiro)